Dhacdooyinkii Taariikh Siyaasadeedka Soomaaliya Qeybtii 5-aad. Cali Cabdi Baab.22/05/2012 Dowladii Daakhaliga...(Somali Trust-ship Assembly)
Bishii Maajo (May) ee sanadkii 1958,waxaa loo doortay,Cabdullaahi Ciise Maxamuud in uu noqdo Reysulwasaaraha Wadanka.Bishii JUUN (June) ayuu isna wuxuu sameeyay Dowlad cusub ee uu ku qancinaayay saaxiibadiisii ay xulafada ahaayeen.
Dowladaasi waxeey ka koobneeyd(15) Toban & shan Waziir & Wasiir-ku xigeeno,Labadii Waziir ee ugu muhimsanaa,waxaa ka mid ahaa, Wasiirkii, Warshadaha oo loo magacaabay,Maxamed Cabdi Nuur.Iyo Wasiirkii Arimaha guud(Minister of General Affairs) oo loo magacaabay, Cabdi Nuur Maxamed,oo ahaa Gudoomiye ku-xigeenkii Xizbigii(XDMS) Xizbiya.
Bishii ku xigtay ee Luulyo(July),Cabdullaahi Ciise waxa uu ka khudbeeyay Golihii-shacabka(Somali Assembly),waxa uu ka hadlay dhinacyo badan, waxaan ka soo qaadan karnaa,isaga oo si cadawtinimo u hadlaayo ayuu waxa uu si xifaaltan ah,carabkiisa ugu adkeeyay in Wadanka Soomaaliya yahay Wadan qura,Dadka Soomaaliyeedna ay isku Diin,Dhaqan & Af kaliya yihiin,uuna jirin Af-kaliya oo aay leeyihiin dadka Soomaalida ah.
Dhacdadaasi maanta ayeey taagan tahay,iyada uu dhigaayo Axdi-qarameedkii Dowladan FKG,l agu soo aas-aasay,in Dalka Soomaaliya uu leeyahay Laba Af (Luqadood) oo kala ah:(May & Maxaatiri aay maanta Shakhsiyaad iyo Kooxo Orod ugu jiraan,sidii looga saari lahaa Qodobkaasi,Dastuurka la rabo in Dalka loo sameeyo,lahaanshaha Labada Af Dalka leeyahay,May & Maxaatiri
Dastuurka lagu muransanyahay,ee la rabo in aay Ansixiyaan Odayaal-dhaqameedyada la soo kireeyay,YAA SAMEEYAY OO QORAY ASALKIISA??.
Waxaa sameeyay Dastuurkan Gabar-Qareen ah oo u shaqeeysa Qaramada Midoobay Xafiiskeeda Arimaha Siyaasada Soomaaliya ee magaalada Nairob(UNPOS).
Gabadhaas oo Magaceeda la dhaho Abril,una dhalatay wadanka JAMEYKA(Jameica) iya iyo Ninkeeda oo asna Qareen ah,una shaqeeya isla xafiiskaasi(UNPOS)u na Dhashay wadanka Itoobiya(Ethiopia) ayaa wada Qoray. Diinta aay aaminsanyihiina waa Diinta loo yaqaano(RAST-FARI),oo micnaheedu yahay sidan:-RAs waa Boqor ama Madax,FARI waa Magac lagu naay-neesi jiray Boqor Xeyle Salaase,Dastuurka lagu murunsan yahay waxaa ku jiro qodobo si weyn ugu soo horjeedo Diinta Islaamka ee Muqadaska ah,waxaa ka mid ah waxyaabaha
ugu yaabka badani waa:-Guurka in uusan saldhig u eheen in aay is guursadaan Laba Jinsi oo kala gedisan,balse ay isguursan karaan laba jinsi oo isku mid ah,waxaa kaloo ka mid ah, in Qof waliba Diintii uu doono in uu qaadan karo ama rumeeyn karo,waxaana la rabaa Dastuurkan in la Ansaxiyo iyada oo aan loo soo bandhigin Ummada Soomaaliyeed.
Waa Qalinkii Lecturer,Cali Cabdi Baab.
La soco qeybaha kale hadii Rabi idmo.